Hiakatra 800 kosa ny mankany Alakamisy Anosiala. Nanaiky ihany ny antokon-draharaha misahana ny fitaterana an-tanety rehefa natao ny fifandresen-dahatra. 800Ar ny sarany notakian’izy ireo nialoha izao noho ny fiakaran’ny solika sy ny halaviran’ny lalana alehany isan’andro, hono, oharina amin’ny taksibe hafa miampy ny fitohanana eny Ambohibao izay tena mandany fotoana tokoa. Ny fanampiana avy amin’ny fitondram-panjakana anefa tsy mandeha araka izay ilana azy intsony. Mba milamin-tsaina indray aloha ireo mpanjifa na dia nisy fisondrotany 100Ar aza ny saran-dalana miazo an’Ivato. Araka ny lalàna, 15 mialoha no mila milaza raha te hampiakatra saran-dalana ny koperativa iray.